(डब्लुएचओ)ले कोरानाका बिरामीलाई १२ देखि १६ घण्टासम्म घोप्टो परेर सुत्न सुझाव दिएको छ – Khabar PatrikaNp
(डब्लुएचओ)ले कोरानाका बिरामीलाई १२ देखि १६ घण्टासम्म घोप्टो परेर सुत्न सुझाव दिएको छ
एजेन्सी । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले कोरानाका बिरामीलाई कैयौँ दैनिके १२ देखि १६ घण्टासम्म घोप्टो परेर सुत्न सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकन र्थोयासिक सोसाइटीले चीनको वुहानमा कोरोनाका बिरामीमा गरेको अध्ययन घोप्टो पारेर गरिएको उपचार विधि प्रभावकारी देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको केही दिन पछि संगठनले त्यस्तो सुझाव दिएको हो । साथै उस्ले अस्पतालहरुलाई पनि यो विधि अपनाउन आव्हान गरेको छ । खासगरि स्वास प्रश्वांसका विरामीहरुको लागि यो विधि अति नै उपयोगी भएको संगठनको दावि छ ।
विरामीलाई घोप्टो पारेर उपचार गर्ने विधिलाई ‘प्रोनिङ’ भनिन्छ र यसो गर्दा फोक्सोमा धेरै परिमाणमा अक्सिजन पुग्छ । बिरामीहरूलाई कैयौँ घण्टासम्म घोप्टो पारेर राख्न सकिन्छ जसले गर्दा श्वासप्रश्वासमा अप्ठेरो पार्नेगरी फोक्सोमा जम्मा भएका हुन सक्ने तरल पदार्थ निस्किन्छ ।
‘कोरोना भएका कैयौँ बिरामीहरूको फोक्सोमा पर्याप्त अक्सिजन पुगेको हुँदैन र त्यसले हानि पुग्छ,’ अमेरिकाको जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक एवं श्वासप्रश्वास रोगका विज्ञ डा. प्यानागिस गालियात्सातोसले बताए ।
त्यसको साटो घोप्टो पार्दा अक्सिजनको प्रवाह बढ्छ अनि फोक्सोको विभिन्न भाग सक्रिय हुन पाउँछ । ‘यसले उल्लेख्य परिवर्तन गराएको देखिन्छ । हामीले कैयौँ बिरामीमा यसले काम गरेको देखेका छौँ’ डा. गालियात्सातोसले बताए ।
बालबालिकाको हकमा यो विधि उपयोग गर्न विचार गर्न सकिने तर त्यसको निम्ति थप विज्ञतासहितका प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक हुने डब्ल्यूएचओले बताएको छ ।
श्वासप्रश्वासका गम्भीर अवस्था बेहोरेका बिरामीलाई घोप्टो पार्दा धेरै फाइदा भएको पाइएको छ ।
‘हाम्रो एउटा प्रमुख चिन्ता मोटोपना हो । साथै छातीमा चोट लागेका व्यक्ति वा भेन्टिलेशन ट्यूब वा क्याथिटर ट्यूब लगाएका बिरामीहरूलाई घोप्टो पार्दा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ ।’ उनले भनेका छन् ।
यो विधिलाई हृदयाघातसँग पनि जोडेर हेरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा यसो गर्दा सास फेर्ने नलीमा बाधापनि पुग्छ ।
घोप्टो पार्ने विधिको फाइदा सुरुमा सन् १९७० ताका देखिएको थियो । तर सन् १९८६ पछि मात्र यसलाई विश्वभरिका अस्पतालहरूले धेरै प्रयोगमा ल्याएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
यो विधिलाई सुरुमा अध्ययन गर्ने र उपयोगमा ल्याउने डाक्टर लुसियानो गाट्टिनोनी हुन् । उनी हाल इटलीको मिलानको यूनिभर्सिटा स्टाटालमा प्राध्यापक हुन्।
प्राध्यापक गाट्टिनोनीले बीबीसीलाई बताएअनुसार सुरुसुरुमा यो विधिबारे निकै आपत्ति जनाइएको थियो । ‘तर अचेल यो व्यापक प्रयोग हुन्छ’ उनले भने।
फोक्सोमा धेरै अक्सिजन पुग्नु मात्र यसको फाइदा नभएको उनले बताए । ‘बिरामीहरूलाई घोप्टो पार्दा, फोक्सोमा पर्ने चाप सबै भागमा बराबर फैलिन्छ’ प्राध्यापक गाट्टिनोनीले बताए।
‘भेन्टिलेटरको मेकानिकल ऊर्जा फोक्सोमा पठाइएको दृश्य एक पटक कल्पना गर्नुहोस्, त्यो भनेको लगातार मुक्का प्रहार गरिएको जस्तै हो । यदि त्यो शक्ति बराबर रूपमा फोक्सोको सबै भागमा फैलियो भने त्यसले र्पुयाउने हानि पनि कम हुन्छ ।’
Prevनेकपाभित्र सहमतिको खाका बनेलगत्तै मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुने, को को बन्लान् मन्त्री
Nextमहिलाहरु भुईमा सुत्ने बित्तिकै सन्तान प्राप्त, सन्तान–दात्री मन्दिर सबैले एक सेयर गर्नुहोला
चुँ’डि:एको हात १० घण्टा लामो श’ल्यक्रि:या पछि ट्रमा सेन्टरमा यसरि जो’डियो (हेर्नुहोस् भिडियो)
ब्रोइलर प्रतिकेजी रू.९० देखि ११५ मा खरीदविक्री, अण्डाको कति ?
पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेकाले संसद विघटन, – इश्वर पोखरेल
निजी विद्यालयले साउन १५ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय